प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य, उपचार जारी -
२०७६, ९ भाद्र सोमबार ०७:४९ August 26, 2019 clickonLeaveaComment on प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य, उपचार जारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ प्रक्रियाद्वारा सिङ्गापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा शुक्रबारदेखि नै उपचार सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण तथा थप उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार सिङ्गापुर गएका थिए ।
सिङ्गापुरबाट आइतबार टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलामा ‘एन्टीबडी’को मात्रा बढेकाले प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाद्वारा शुक्रबारबाटै उपचार सुरु गरिएको छ । हाल उहाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।”
उनको प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार अझै १० दिनसम्म हुनसक्ने जानकारी दीइन । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा भैरहेको छ । उक्त अस्पताल मिर्गौला उपचारको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त मानिन्छ ।
डा. शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि अझै केही पटक गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीको उपचार सुरु गरिएको र स्वास्थ्यस्थिति सामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै आइतबार ट्विट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको १२ वर्षाघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
२०७५, ३० श्रावण बुधबार ०३:२० August 15, 2018 clickon
के तपाई गाडी चलाउदा लेनको पालना गर्नुहुन्छ ? होस गर्नुस् घर मै फोन अाउला
२०७५, २९ असार शुक्रबार ०९:४५ July 13, 2018 clickon
२०७५, ३ श्रावण बिहीबार १४:३३ July 19, 2018 clickon